Premier3In 1 Barista Fusion 16G 1 Pack 20 Sticks – SUNNY eSTORE
Premier3In 1 Barista Fusion 16G 1 P...
Premier3In 1 Barista Fusion 16G 1 Pack 20 Sticks
SUNNY Everyday StoreSKU: 5060075355752
Premier3in 1 Barista Fusion သည် တစ်မူထူးခြားသော ကော်ဖီစေ့ငယ် လေးများ နဲ့ အအေးခြောက်ခံ ထားသော coffee စေ့ ငယ်များ ပေါင်းစပ်ပြီးဝပြုလုပ်ထားတာပါ။ သင် ဤကော်ဖီ သည် ဆိုင်မှ ဖျော်ပေးထားသလို ကောင်းမွန်ပြီး သောက်လိုက် သည်နှင့် စိတ်ကြည်လင်တတ်ကြွမှု ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤနှစ်ဆင့် ထဲ နှင့် ကော်ဖီကို ပြင်ဆင်ပါ :
၁) ကော်ဖီထုတ် ကို ခွက်ထဲသို ဖောက်ထည့်ပါ။
၂) ရေနွေးပူ ၁၂၅ ml ခန့်ကို ခွက်ထဲထည့် ပြီး မွှေပါ
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ - သကြား ၊ non - dairy creamer ၊ အဆင်သင့်ဖျော် ကော်ဖီ
Premier3in 1 Barista Fusion isaunique fusion of micro-ground coffee and freeze-dried coffee that will relax your mind and soul with the real freshness of coffee as if the barista prepared for you.
You can prepare this coffee in2simple steps :
1) Pour the coffee stick intoacup
2) Add approx 125ml of hot water into the cup and stir.
Key Ingredients: Sugar, no - dairy creamer, freeze-dried micro-ground coffee
Includes: 20 individually wrapped sticks of Premier3in 1 Barista Fusion